DAAWO: Chelsea oo ku bar-baratay Dynamo Kyiv xilli uu Saddexleey ka kacay Giroud – Wakaaladda Wararka Hiilnews
DAAWO: Chelsea oo ku bar-baratay Dynamo Kyiv xilli uu Saddexleey ka kacay Giroud
Jimco, Marso, 15, 2019 (HNN)- kooxda Chelsea ayaa ku du durisay kooxda Dynamo Kyive kualn ka tirsanaa lugta labaad ee wareega 16-ka ee tartanla Europe League , kulan ciyaareedka ayaana ku soo dhamaaday ( 5-0 ) balse marka loo eego wadarta labada kualn natiijada ciyaarta waxa ay noqoneysaa . ( 8-0 )
Qeebtii koowaad ee kulan ciyaareedka kooxda Chelsea ayaa la timid qaab ciyaareed aad u wanaagsan iyaga oona la yimid sedex gool inta aan la aadinba qeebta dambe ee ciyaarta .
Xiidga jooga dheer ee xulka farnce ee Olivier Giroud Ayaa daah furay bandhiga goolasha kaddib markii uu caawin ka helay Ruben Loftus-Cheek daqiiqadii 5-aad ee ciyaarta .
Bules ayaa dhan walba kaga wanaagsaneed kooxda Dynamo Kyiv oo ku ciyaareysay garoonkeeda waxaana markale yimid goolka labaad ee ciyaarta waxaana markale shabaqa gaaray Olivier Giroud daqiiqadii 33-aad ee ciyaarta .
Daafaca reer Spain ee Marcos Alonso oo caawiye ka ahaa goolkii labaad ee uu dhaliyey Giroud ayaa marka shaqsi ahaantiisa dhaliyey goolkii sedexaad ee ciyaarta kaddib markii uu caawin ka helay da’yarka lagu magacaabo Callum Hudson-Odoi , natiijada ciyaarta ee qeebtii koowaad ayaana ku soo dhamaatay (3-0). Balse marka dhanka kale loo eego iyada oo lagu daraayo natiijo ciayaareedkii kulankii hore waa (6-0)
Nasiino kaddib waxaa dib loo baastay qeebtii dambe ee ciyaarta kooxda Bules ayaana halkeeda ka sii wadatay dhalinta goolasha waxaana markii sedexaad shabaqa gaaray Olivier Giroud oo dhaliyey goolasha loo yaqaan sedexleyda waxaana goolka sedexaad ka caawiyey laacibka Reer Barazil ee Willainnatiijada kualnka ayaana noqotay (4-0) .
Kulanka waxaa xaadir ku aha agaroonka xidigii hore ee kooxaha dynamo iyo Chelsea ee Andriy Shevchenko oo layabanaa waxa ku dhacya kooxda ka dhisan wadankiisa Ukrain ee dynamo Kyiv.
daqiiqadii 78-aad ciyaarta da’yarka xaawaaraha badan ee Callum Hudson-Odoi ayaa dhaliyey goolkii shanaad ee ciyaarta kaddib caawin uu ka helay Giroud .
DAAWO: Chelsea oo ku bar-baratay Dynamo Kyiv xilli uu Saddexleey ka kacay Giroud added by admin on 15/03/2019